रोनाल्डो गएपछि बिस्तारै ओरालो लागेको रियल बिस्तारै लयमा फर्कंदै ! कसरी भयो सम्भव?
एजेन्सी – पछिल्लो एक महिनामा रियल म्याड्रिडले प्रदर्शन सुधार गर्दै लगातार एक माथि अर्को जितको नतिजा दर्ता गर्दै आएको छ ।
जनवरी ६ मा रियल सोसीडाडसँग घरेलु मैदानमा २-० ले पराजित भएको रियलले त्यसयता उत्कृष्ट लय देखाएको छ । उक्त हारपछि रियल बार्सिलोनाभन्दा १० अंक पछाडी रहेको थियो । पछिल्लो समय भने रियलले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्दै स्थिति बदलेको छ ।
शनिबार म्याड्रिड डर्बीमा एटलेटिकोलाई पराजित गर्दै रियल अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । कोपा डेल रेको पहिलो लेगमा बार्सिलोनालाई बराबरीमा रोक्दै फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई पनि जिवितै राखेको छ । पछिल्लो १० खेलमा रियलले ८ जित, १ बराबर र १ हार बेहोरेको छ । त्यसमध्य बराबरी बार्सिलोनासँग कोपा डेल रेको पहिलो लेग र हार लेगानेसविरुद्ध कोपाकै दोस्रो लेगमा रहेको थियो ।
रियलले पछिल्लो समय राम्रो नतिजा हासिल गर्नुका केहि कारणहरु यसप्रकार छन् :
सान्टियागो सोलारीले लेफ्ट ब्याकमा अनुभवी मार्सेलोको स्थानमा सर्जियो रेगुलियनलाई मौका दिए । रेगुलियनले लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्दै अहिले पहिलो रोजाइमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । रेगुलियनको लगातार राम्रो प्रदर्शन र सर्जियो रामोस, राफेल भाराने र क्यसेमिरोको प्रदर्शन सुधार हुनुले डिफेन्स बलियो भएको छ ।
सिजनको सुरुवातमा खस्केका लुका मोड्रीच र टोनी क्रुसले पनि नियमित रुपमा राम्रो खेल्न थालेका छन् । फरवार्ड करीम बेन्जेमाले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो प्रदर्शन देखाएका छन् । लगातार राम्रो नतिजाले टोलीको मनोबल पनि बढेको छ । प्रशिक्षक सोलारी पनि अझै बढीआत्माविश्वासी देखिएका छन् र टोलीको साथ पाउन थालेका छन् ।
प्रशिक्षक सोलारीले गरेका केहि परिवर्तनले रियलको नतिजा सुधार आउनुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको छ । रेगुलियनमाथि विश्वास देखाउनुले उनको प्रदर्शन सुध्रिनु त छँदै छ । मार्कोस लोरेन्टे र भिनिसियस जुनियरको उदयमा पनि सोलारीकै भूमिका रहेको छ । खेलाडीहरु चोटबाट फर्कने क्रम जारी छ र यो सिलसिलाले अझै निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ २९, २०७५१२:२३
चोटले ग्रस्त पीएसजीलाई युनाइटेडको चुनौती ! नेयमार, काभनी नभएपछि एम्बाप्पेकै भर !